Ahiahy hala-bato :: Miantso ny fahamailoan’ny rehetra ny Ceni • AoRaha
Ahiahy hala-bato Miantso ny fahamailoan’ny rehetra ny Ceni
Manao antso avo amin’ireo olom-pirenena sy ireo kandidà nilatsaka hofidiana amin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina, hatao amin’ny 27 novambra 2019, mba ho mailo ny Vao­miera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Mandeha ny feo fa misy andian’ olona mikasa hanaparitaka biletà tokana sandoka sahady any amin’ireo fari-pifidianana sasany, araka ny nambaran’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakoto­narivo Thierry, tetsy amin’ny foiben’ny Ceni Alarobia, omaly.
“Manentana anareo mpifidy sy ny kandidà izahay mba handray andraikitra raha mahatsikaritra fihoaram-pefy sy hala-bato ianareo. Ento ny porofo. Mandehana mitory. Mijoroa vavolombelona fa vonona hanampy sy hanoro lalana anareo izahay. Etsy andanin’izany, hanadihady sy hitsikilo an’ireo atidoha miketrika famitaham-bahoaka ireo ny Ceni sy ny mpanara-maso isan-tsokajiny. Mila mailo ny rehetra satria voka-pifidianana mangarahara sy eken’ny rehetra tokoa no tanjona amin’ity fifidianana manakaiky vahoaka hataontsika ity”, hoy izy.
Fitsarana samy hafa
Nampahafantariny koa fa “fitsarana roa samy hafa no hametrahana ny fitoriana mikasika an’ireo kandidà na mpomba azy ka tratra mandika lalàna. Any amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany no hanaovana izany raha heloka bevava, toy ny vono olona,
fihantsiana ady… Any amin’ ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana kosa raha heloka mifandray amin’ ny fifidianana, toy ny fametahana afisy amin’ny toerana tsy azo anaovana izany, fanao­vana fampielezan-kevitra amin’ny toerana voarara… Hentitra ny fepetra horaisina amin’izay tratra mihoa-pefy, hoy izy, satria hiantomboka amin’ny fanafoanana ny vato azo izany ary mety hifarana amin’ ny fanagadrana mihitsy”.
Noho ity ahiahina fanaparitahana biletà tokana hosoka ity hatrany no nahatonga ny Ceni nampiseho ny maodelina biletà, tetsy Ala­robia, omaly. Efa naparitaka any amin’ireo distrika miisa sivy ambin’ny folo amby zato rehetra manerana ny Nosy ireo biletà tokana maodely ireo. Azon’ny kandidà atao ny maka izany any amin’ireo kaominina nilatsahany hofi­diana.
“Maodely ihany ireo fa ny biletà tokana tena izy mbola an-dalam-panontana, etsy amin’ny Tranompirintim-pirenena. Hampahafantarina miandalana eo ihany ny marika manokana hanavahana ny biletà hosoka amin’ ny tena izy”, hoy hatrany Rakotonarivo Thierry.
Baolina kitra – Belzika :: Lasibatry ny fanavakavaham-bolonkoditra i Marco Ilaimaharitra
Fibaikoana ny zandarimaria :: Zandary telo ambin’ny folo amby zato nahazo mari-pankasitrahana